””Horseedfc.net”Payet oo niyad jabiyay kooxaha doonaya – Horseed Sports Club
””Horseedfc.net”Payet oo niyad jabiyay kooxaha doonaya
Dimitri Payet ayaa shaaca ka qaaday 100% inuu sii joogi doono West Ham”.
29-sano jirkaan ayaa lala xiriiranaayay inuu iskaga dhaqaadi doono kooxda ka dhisan magaalada London, Kadib markii uu qaab ciyaareed cajiib ah kasoo bandhigay Euro2016 xili xulkiisa dhagta ciida loo daran Final kii.
Ciyaaryahaankii hore Marseille ayaa ka ciwaayiyay kooxda Hammers ka inuu ku dhameesato kaalinta 7aad xagagii hore horyaalka Premier League. Slaven Bilic ayaa si weyn iskugu dayay inuu xidigaan ku celiyo kooxda.
” Waxaan maqlay xiisaha dhan , Inoo is faansheen, Laakiin waxaan jeclahay West Ham, Payet ayaa u sheegy The Sun. ” Waxaan soo maray xili ciyaared cajiib ah waaan sugi la’ahay inaa ku ciyaaro Olympiic Staduim.
” Aniga 100% waxaan joogi doonaa West Ham, Waan jeclahay kooxda, Waxaan u sheegayaa taageerayaasha Hammers ka arintaas